Lembeng Beach any Bali. Indonezia " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Lembeng Beach any Bali. Indonezia
Topimaso momba ny morontsiraka Lembeng any Bali
Ny mari-pamantarana lehibe mamaritra ity morontsiraka ity dia:
Surfing tsara indrindra any Bali
Ny morontsiraka Lembeng dia any amin'ny faritra atsimon'ny Bali, 5 km avaratra Sanur, kilometatra vitsivitsy avy eo Denpasar... Mainty ny fasika eny amoron-dranomasina. Misy ala hazo rofia eo akaiky eo, izay, atambatra amin'ny rano manga, dia mamorona tontolo mahafinaritra. Lembeng dia mety amin'ny fiposahan'ny masoandro, ny diany ary ny fitsangatsanganana. Ny onja mahery koa dia manao an'ity morontsiraka ity ho toerana fitetezam-paritra tsara.
Surf amin'ny Lembeng Beach
Saingy tsy afaka milomano eto ianao - satria mitovy onja be, ary koa noho ny onja mahery. Etsy an-danin'izany, noho ireo antony ireo ihany, ny surf amin'ny Lembeng dia tsy azon'ny mpankafy rehetra an'ity fanatanjahantena ity, fa ho an'ireo efa za-draharaha kokoa na tsy dia mahay loatra.
Fasika maintin'ny morontsiraka Lembeng
Ity amoron-dranomasina ity dia manana gazebo ho an'ny piknik, sakafo kely ary fivarotana zava-pisotro misy alikaola, ary kafe sy fivarotana fahatsiarovana maromaro. Ny lalan'ny mpandeha an-tongotra dia mihazakazaka manaraka ny morontsiraka iray manontolo, izay vita amin'ny taila vita amin'ny mena.
Hipoka maraina i Lembeng, fa amin'ny hariva dia afaka mankafy ny fahanginana eto ianao. Misy fijanonana eo akaiky eo. Misy fidiovana sy fandroana eny amoron-dranomasina. Manakaiky ny fiolahana amin'ny lalana mankamin'ny moron-dranomasina ianao dia afaka mahita ireo tanimbary voavary, ary eny amoron-dàlana - hazo rofia.
Zavatra tokony hatao ao amin'ny Lembing Beach
Ho fanampin'ny surf, ny fitsangantsanganana ary ny fandehanana dia azo atao koa ny manjono amin'ity morontsiraka ity. Noho izany antony izany dia mila mandeha any amin'ny ranomasina ianao amin'ny fanofana lakana. Betsaka amin'izy ireo no eny amoron-tsiraka. Manaikitra tsara be ny morontsiraka ny trondro, ka tsy ilaina ny mivoaka lavitra any an-dranomasina.
Eo akaikin'ny Lembeng Beach no misy ny Tempolin'i Huang Sangkur Lembeng kely. Haran-dranomasina midina ao anaty ranomasina no mandrafitra ny rindriny.
Mahafinaritra koa ny mandeha amoron-dranomasina mijery fotsiny ny ranomasina. Ireo onja mahatalanjona mahatalanjona amin'ity faritra any Bali ity dia mahatonga anao tsy hahita.
Any amin'ny South-Southwest of Bali no misy an'i Lembeng Beach. Manodidina ny elanelana mitovy amin'ny Denpasar. Dimy kilometatra miala ny morontsirak'i Sanur. Raha miala eo Sanur mankany Lembeng (avaratra atsinanana) ianao ary mandroso lavitra, dia aorian'ny 7 km dia hihazo ny morontsiraka ianao Keramas.
adiresy: Gianyar, Jl. Prof. Dr. Ida Bagus Mantra No.52, Batubulan, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, Indonesia
mandrindra: -8.649042, 115.275994
Morontsiraka Lembeng amin'ny sari-tanin'i Bali
Morontsiraka Lembeng amin'ny sari-tany zanabolana Bali
Sarin'ny morontsiraka Lembeng any Bali
Onja eny amin'ny Lembing Beach
Tsy dia madio loatra ny morontsiraka Lembeng, ary amin'ny vanim-potoana ambany dia tononina izy